Soo bandhigid: Bulshadda oo loo sii gudbo - Buugga Ganacsiga | Martech Zone
Arbaco, Juun 18, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Shalay waxaan ka hadlay goobta Ururka Caalamiga ee Isgaarsiinta Ganacsiga ee Indianapolis. Dhaqdhaqaaqa dhagaystayaasha ayaa isku qasan shirkadaha yar yar iyo kuwa waaweyn, iyo dadka ganacsatada ah ee ka faalooda baraha bulshada laga bilaabo newby iyo kuwa khibrad u leh suuq geynta bulshada.
Waqti kasta oo aan diyaariyo soo bandhigid, waxaan dib ugulaaban taariikhda soo bandhigida ee aan horey u sameeyay… daadinta isqurxinta iyo macluumaadka aan waqtiga ku sii joogin, iyo ku darida bogag cusub oo mowduucyo ah goor dambe. In kasta oo aan had iyo jeer ku jirno cirifka waxa ka dhacaya warbaahinta bulshada, sheekadu si aad ah ayey isu beddeshay. Mid ka mid ah furaha ayaa ah xidhiidhadaada ganacsi ee leh rajooyinka iyo macaamiisha hadda waa rajo.
Xayeysiinta ayaa loo isticmaali jiray in lagu kiciyo carada qof kasta oo soo booqda. Maanta, in kasta oo aan had iyo jeer la soo dhaweyn, waxaa jira dad aad u tiro yar oo ka cabanaya xayeysiinta iyo dallacsiinta laga helo joogitaanka bulshada ee shirkadda. Xaqiiqdii - tirakoobyada qaarkood ee aan bixinay waxay muujinayaan inay jirto rajo dhimis iyo dalabyo dad badan ay ka helaan. Runtii iyagu doonayaa shirkadaha iibiya!
Istaraatiijiyad kale oo cay noqon lahayd ayaa ah waxyaabaha la bixiyo. In kasta oo dadka badankood aysan xitaa ogeyn marka waxyaabaha la bixinayo… fikradda ah waxyaabaha la bixiyay waxay dhalisay dhaliil xad dhaaf ah muddo dheer. Xaqiiqdii waxaan ahaa taageere dhammaan. Xaqiiqdu waxay tahay in qorayaal badan ay qabtaan shaqo aad uga wanaagsan oo muujineysa dadaalka meherad - inbadan oo ka badan shirkadaha laftooda. Soo-saarista waxyaabaha ku jira way adag tahay - haddii aysan ahayn shaqadaada. Qorayaasha cilmi baarista iyo nuxurka ee aan xiriir la dhisnay waxay qabtaan shaqo yaab leh.
Waxa aan is bedelin ayaa ah inay wali fursad la yaab leh siineyso shirkad leh aqoonsi sumcad yar iyo miisaaniyad yar oo suuq geyn ah si ay u dhisaan ganacsi yaab leh. (Joog shirkadda Wax kale oo aan kaliya isbeddelin, laakiin dhib badan helay, ayaa ah dhisidda iyo dhiirrigelinta waxyaabaha aad ka kooban tahay iyo istiraatiijiyadda warbaahinta bulshada. Sababta Sababtoo ah tartankiina iyo ganacsigaagii weynaa ayaa ugu dambayntii qabsaday.
Dejinta rajooyinka raadinta ama bulshada ayaa sii adkaanaysa maalmahan maxaa yeelay tiknoolajiyadda, aaladaha iyo tartanka dhammaantood way socdaan. Waagii hore, helitaanka maamulka iyo dhisida ganacsi bulsheed waxay ahayd - geesinimo aan dhaho - fudud. Maalmahaas way dheer yihiin, in kastoo. Majiraan wadooyin gaaban. Tartanku waa adag yahay waxaadna u baahan tahay inaad runti u hurto ilaha ugu fiican ee lagu dhisi karo barnaamijyadaada. Faa'iidooyinka keydka muhiimka ah wali waxay la imaanayaan istiraatiijiyad weyn… hadda way ka dhib badan tahay sidii lagu gaari lahaa
Tags: pptbandhigwarbaahinta bulshadasoo bandhigida warbaahinta bulshadaxeeladaha warbaahinta bulshada